Cele Gabar - Page 10 of 333 - The World of Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ မေမြင့်မိုရ်နဲ့ သျှင်းမြတ်တို့ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာအသီးသီးရရှိထားတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က မေလ (၁၂)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ မေမြင်မိုရ်ရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက်ကို ပရိသတ်တွေရော အနုပညာရှင် မောင်နှမတွေအားလုံးက သတိတရနဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ မောင်ဖြစ်တဲ့ သျှင်းမြတ်ကလည်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ငယ်ဘဝကမောင်နှမနှစ်ယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးနဲ့အတူ အခုလိုပဲမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ “Happy Birthday one & only beloved sister .. Thank you for always beingarole model. ဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ပီး ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ ” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းထားခဲ့တာပါ။ CeleGabar …
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေG-Fattကတော့ ထိမိတဲ့စာသားတွေကိုသီဆိုတတ်တာကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေ အားပေးဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဆိုတာ အမှန်ပါပဲနော်။ အခုလက်ရှိအချိန်ထိ ယောကျာ်းလေးမိန်းကလေးပရိသတ်တွေသာမက ကလေး အရွယ်တွေကပါ အားပေးဝန်းရံခြင်းခံရသူပါ။ သီချင်းသစ်တွေထွက်လာတဲ့အခါတိုင်း ပရိသတ်ရင်ထဲကိုတစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲ ထိရှအောင် ဖန်တီးတတ်တဲ့ အဆို ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူငယ်တွေလက်တွေ့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ အချစ်ရေးပုံစံတွေကိုထိထိမိမိနဲ့ ပုံဖော်ရေးတတ်တဲ့ တေးရေးဆရာတစ်ဦးလို့တောင်တင်စားရမှာပါ။ G-Fatt တစ်ယောက်ကတော့အခုချိန်မှာ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပဲ အချိန်ပေးကာ Singleအဖြစ်နဲ့ ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့”ပရိတ်သတ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ဘက်မှ 🖤🌻”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့သီချင်းစာသားလေးဖြစ်တဲ့”ကောင်လေးကရယ်ရတယ်….ကောင်မလေးကဒီဘဝဒီမျှပဲလို့ပြောတာတောင်…..ပြန်အဆင်ပြေချင်တယ်လို့ဂျီကျတယ်…”ဆိုတဲ့စာသားလေးကို တက်တူးထိုးထားတဲ့ပုံရိပ်လေးကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ Koe-CeleGabar Source – G- Fatt ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် “သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းစာသားနဲ႔ပုံေလးကို အမ်ိဳးသားပရိသတ္တစ္ဦးရဲ႕ရင္ဘက္မွာတက္တူးထိုးကာ အားေပးဝန္းရံျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ G-Fatt” CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရG-Fattကေတာ့ ထိမိတဲ့စာသားေတြကိုသီဆိုတတ္တာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကပရိသတ္ေတြ အားေပးဝန္းရံျခင္းခံရတဲ့ …
2 weeks ago	International Cele
အသက်(၂၆)နှစ်အရွယ် မျက်နှာသစ်မင်းသမီးလေး Kim Min Ha ကတော့ ဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာပါ။ Apple TV+ကပြသခဲ့တဲ့ “Pachinko” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဆွန်းဂျာဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုအပြည့်အဝပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ရုပ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက် နာမည်ကျော်တွေကိုကျော်တက်ပြီး ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသလို ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ Kim Min Ha ကတော့နာမည်ကျော်ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Roger Vivier ရဲ့ Brand Ambassador အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကတော့ မင်သမီး Shin Min Ah နဲ့လည်း Brand Ambassador အဖြစ်လက်တွဲထားတာပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Kim Min Ha ကတော့ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ဖိနပ်နဲ့အိတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီး လှပတဲ့ပုံရိပ်တွေကို အင်စတာဂရမ်ကတစ်ဆင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံရိပ်တွေမှာတော့မင်းသမီးချောလေး Kim Min …
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ညီထွဋ်ခေါင်ကတော့ ဇာတ်ပို့မင်းသားအဖြစ်ပရိသတ်တွေသိရှိပြီးသားပါ။ ဒါ့အပြင် ကျော်ကျော် ၊ဆုမြတ်နိုးဦးတို့နဲ့အတူသူငယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေကအထူးအားပေးနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ Covid 19ကြောင့် အသက်ဆူံရှုံးခဲ့​ြပီးဖြစ်တဲ့ ချစ်သူအတွက်အမြဲသတိတရ​လွမ်းဆွတ်ကာ အမြဲကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိတာပါ။မနေ့ကကျရော မေလ၁၀ရက်နေ့မှာလည်း ”ဒီနေ့ ၁၀ လပြည့်ပီ…ရည်စူး ကုသိုလ် ပြုပါတယ် မေရေ…လွမ်းတယ်… …”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ လတိုင်းသတိတရနဲ့ ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ညီထွဋ်ခေါင်ကတော့ ချစ်သူလေးကိုအမြဲသတိရနေဆဲပါပဲနော်။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်းညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ခံစားချက်လေးကို နားလည်ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်ဆိုရင်အားပေးစကားပြောခဲ့ပါဦးနော်။ Koe- CeleGabar Source-Nyi HtutKhaung ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ” ကြယ္လြန္သြားတဲ့ခ်စ္သူေလး၁၀လျပည့္အတြက္ရည္စူးကာ သတိတရနဲ႔ လႉဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ညီထြဋ္ေခါင္” CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ညီထြဋ္ေခါင္ကေတာ့ ဇာတ္ပို႔မင္းသားအျဖစ္ပရိသတ္ေတြသိရွိၿပီးသားပါ။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ဆုျမတ္ႏိုးဦးတို႔နဲ႔အတူသူငယ္ခ်င္း၃ေယာက္ရဲ႕ဟာသဗီဒီယိုဖိုင္ေလးေတြကိုဆိုရင္လည္း ပရိသတ္ေတြကအထူးအားေပးႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ၾကတာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ Covid 19ေၾကာင့္ အသက္ဆူံရႈံးခဲ့​ၿပီးျဖစ္တဲ့ ခ်စ္သူအတြက္အၿမဲသတိတရ​လြမ္းဆြတ္ကာ အၿမဲကုသိုလ္ေတြျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိတာပါ။မေန႔ကက်ေရာ …
CeleGabar ပရိသတ်ကြီး​ေရခေးဆက်သွင်ကတော့ နန်းဆန်တဲ့အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အပြုံးလေးတွေနဲ့ အပြုအမူအပြောလေးတွေကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူပါ။ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ ရရင်ရသလိူ အလှူဒါန လေးတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့မင်းသမီးလေးဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်နော်။ ဒါ့အပြင်ခေးဆက်သွင်ကတော့ MRTV- (4) ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီးလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းလွန်းတဲ့မင်းသမီးလေး ​ြဖစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကအချစ်ပိုနေရသူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ။အရိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ” အညို ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေအားပေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ” နှင်းဆီ ” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ” နှင်းဆီ ” ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူမကတော့မြန်မာနိုင်ငံရင်အထင်ကရမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ ပုဂံမြို့ကိုရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”ပုဂံမြေ🤎🤎🤎”ဆိူတဲ့စာလေးနဲ့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ပုဂံမြေရောက်ပူံရိပ်လေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါCeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ။ Koe-CeleGabar Source – KhaySettThwin ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ” ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြစုစည္းတည္ရွိတဲ့ ပုဂံေျမကို သြားေရာက္လည္ပတ္ေနတဲ့ေခးဆက္သြင္” CeleGabar …
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေဘုန်းသီရိကျော်ကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဇာတ်လမ်းတိုတွေအပြင် ကြော်ငြာလေးတွေလည်းရိုက်ကူးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စိုင်းစိုင်းရဲ့ Sai Cosmetix ပြိုင်ပွဲကနေစပြီးအနုပညာအလုပ်တွေစလုပ်ခဲ့တဲ့သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မျက်နှာလေးက လမင်းလေးသဖွယ်ဝိုင်းဝိုင်းပြည်ပြည့်လေးနဲ့ ဇော်ပိုင်ရဲ့ မေသီချင်းလိုပဲ ဘုန်းသီရိကျော်ကတော့ အမျိုးသားပရိသတ်တွေတခဲနက်ဝန်းရံ အားပေးခြင်းခံရတဲ့မင်းသမီးလေးလို့ဆိုရမှာပါ။ ချစ်စရာကောင်းခြင်းတွေစုစည်းထားတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ အပြုံးတွေ ၊စကားပြောဟန်တွေက အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကို ဆွဲခါလှုပ်ရမ်းနိုင်သူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့​မကြာခင်မှာကျရောက်တော့မယ့်မိုးရာသီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့ငယ်ဘဝအမှတ်တရလေးတွေကိုပြောပြလာခဲ့တာပါ။”မိုးရာသီနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမှတ်တရတွေရှိကြလား? ☔️ Jenny ဆီမှာတော့ မိုးရာသီဆို လွမ်းမောစရာရော၊ ပျော်ရွှင်စရာရော အမှတ်တရတွေမျိုးစုံရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေပဲ ပြောပြချင်တယ် 😊တက္ကသိုလ်တက်တုန်းကဆို ထီးတစ်ချောင်းတည်းပါလာပြီး သူငယ်ချင်းအုပ်လိုက်နဲ့ မိုးသည်းကြီးထဲ အတန်းတွေလစ်၊ ကန်တင်းသွားနဲ့ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင် ပျော်စရာတွေချည်းပါပဲ။ Jenny ပရိသတ်တွေထဲမှာရော မိုးရာသီနဲ့ပတ်သတ်ရင် ဘာအမှတ်တရတွေ ရှိကြလဲ? ပြောပြသွားဦး… အပျင်းပြေထိုင်ဖတ်ချင်လို့ …
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်အချစ်တော်လေးစိုးပြည့်သဇင်ဟာ အသက် (၁၈ )နှစ်အရွယ်မှာ “မိုးညအိပ်မက်မြူ” ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာသာမက အဆိုဘက်မှာလည်း ထူးခြားချိုသာတဲ့အသံလေးနဲ့အဆိုကောင်းသူတစ်ယောက်ပါနော်။ အနုပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသမီးတွေရဲ့ မျိုးဆက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာ စိုးမိသားစု ဆိုရင် မသိသူမရှိ တဲ့စိုးမြတ်သူဇာ စိုးမြတ်နန္ဒာ စန္ဒီမြင့်လွင် တို့နဲ့ အမျိုးတော်စပ်တဲ့အပြင် သူမဟာလည်း အနုပညာပါရမီက မခေသူတစ်ယောက်ပါ။အဆိုဘက်မှာလည်း သူမသီချင်းတွေကို ပရိသတ်တွေကလက်ခံအားပေးတဲ့အပြင် ချိုသာအေးမြတဲ့ အသံပါဝါကောင်းသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိဘဆရာသမားတွေအပေါ်မှာလည်း ရိုသေသိတတ်မှုရှိတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်လက်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ မိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်စွာခရီးသွားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ဂျင်းဝမ်းဆက်ဖက်ရှင်နဲ့ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့တစ်ကိုယ်တော်ပံု​ရိပ်လေးတွေကိုလည်းတင်လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်းစိုးပြည့်ရဲ့ခရီးသွားပုံရိပ်တွေကို ကြည့်ရှူနိူင်ဖို့အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Koe- CeleGabar Source- SoePyaeThazin ZawgyiFontဖြင့်ဖတ်ရန် ” ေပါ့ပါးလြတ္လပ္တဲ့ဂ်င္းဝမ္းဆက္ဖက္ရွင္ေလးကိုစတိုင္က်က်ဝတ္ဆင္ကာ …
အနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဝါရင့်မင်းသမီးကြီး Kang Soo Yeon ကတော့ မေလ(၇)ရက်နေ့က ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ကာသတိလစ်နေခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး (၃)ရက်တာကုသခဲ့ပေမဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသုဘကိုတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနုပညာမောင်နှမတွေက တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ မင်းသမီး Park So Dam လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ဂါရဝပြုရင်းကြေကွဲဖွယ်ရာဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ “မင်းရဲ့စကားလုံးတွေ အကြည့်တွေနဲ့ ပွေ့ဖက်ခဲ့စဉ်ကနွေးထွေးမှုတွေ ဒါတွေကို မေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြဲလေးစားပါတယ် စီနီယာ” လို့ ဆိုပါတယ်။ အနုပညာလောကရဲ့ငွေကြယ်တစ်ပွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့တာ တကယ့်ကို ဝမ်းနည်းစရာပါ။ မင်းသမီးကြီး Kim Soo Yeon ဟာဘဝတစ်လျှောက်အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ရင်းဖြတ်သန်းခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ အသက်(၄)နှစ်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်စလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးကြီးပါ။ သူဟာ နှစ်အတော်ကြာအနုပညာအလုပ်နားရာကနေ …
ပရိသတ်ကြီးရေ ရွှေသမီးကတော့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကြောင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုပါ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ အထိအောင်မြင်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ ရွှေသမီးကတော့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ရုပ်ရည်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရိုးသားပွင့်လင်းလှတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် လူကြီးလူငယ်မရွေးရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ရွှေသမီးကတော့ ပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပွဲတက်ရောက်ခဲ့စဉ်ကပုံလေးတွေကို မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ ပုံလေးတွေထဲမှာတော့ ရွှေသမီးက ရွှေရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ကြွေရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုကို လှပနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက ရွှေသမီးကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ရွှေသမီးရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source – ရွှေသမီး – Shwe …
A Business Proposal ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ပရိသတ်တွေကြားအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီး ပါဝင်ထားတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ချီးကျူးမှုတွေရရှိထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ Kim Min Gyu နဲ့ Seol In Ah တို့နှစ်ဦးကတော့ သရုပ်ဆောင်ရာမှာအချိတ်အဆက်မိပြီး ပရိသတ်တွေကို အကြိုက်တွေ့စေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ချစ်သူတွေအဖြစ်အလွန်ပီပြင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကို သဘောကျစေခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့နှစ်ဦးကိုလက်တွေ့ဘဝမှာပါ ချစ်သူတွေအဖြစ်မြင်တွေ့ချင်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Kim Min Gyu ကတော့ မကြာသေးခင်မှာ The Manager ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူက A Business Proposal ဇာတ်ကားထဲကဇာတ်ဝင်ခန်းကိုအတော်လေးသဘောကျခဲ့ပြီး မင်းနဲ့ Seol In Ah တို့နှစ်ဦးကြားထဲမှာတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုပြီး ပြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ Kim Min …